UShalulile uveza ukwesaba abenakho ngesikhathi efika kwiSundowns - Impempe
UShalulile uveza ukwesaba abenakho ngesikhathi efika kwiSundowns
Umgadli weMamelodi Sundowns, uPeter Shalulile uthi wake wesaba efika kuleli qembu. Lapha ubebanga ibhola noSibongiseni Mthethwa weBlack Leopards
Umgadli weMamelodi Sundowns, uPeter Shalulile uthi uke waba nokuzibuza ukuthi ngeke yini naye afike ahluleke wukubamba isitayela saleli qembu bese egcina esephenduke isihlwele.
Ubezibuza kufanele lokhu lo mgadli waseNamibia kwazise baningi abanye ngaphambi kwakhe abafika kwiMasandawana bethwelwe ngeqoma futhi kubhekwe lukhulu kubo kodwa bagcina bengakwazanga ukungena eqenjini eliqala imidlalo.
Lapha singabala o-Aubrey Ngoma, Jeremy Brockie noGeorge Lebese ababebatshazwa ukuvutha bengabaselwe emaqenjini ababesuka kuwo kodwa wavele wacisha lowo mlilo uma sebefike eChoorkop.
“Ukukhuluma iqiniso nje, ngisamangele ngokwenzekayo. Benginokukhathazeka ukuthi ngingase ngihluleke. Kodwa kusekuningi okumele kwenziwe. Ngijabule ngendlela engiqale ngayo, kodwa kusekuningi okuhle okuzayo,” kusho uShalulile ekhuluma nabeSAfm ngoLwesine ntambama.
UShalulile akazithusanga nje yena kuphela ngokusheshe angene esikimini kwiBrazilians kodwa uvale imilomo nalabo ababethi ukhethe iqembu elingamfanele ngoba indlela adlala ngayo ayihambelani neyeSundowns.
“Kuhluke kakhulu lapha kwiSundowns kunakwiHighlands Park (abadlala kuyo ngesizini edlule) la besiya ngqo phambili nebhola. Lana siyalidlala kuqala ibhola, sinabantu abafana no(Themba) Zwane no(Kermit) Erasmus abakha inqwaba yamathuba. Akubanga lula (ukujwayela), futhi akukezuba lula, kodwa ngijabule,” kuchaza uSha-Sha, okuyigama asefike waliphiwa kwiSundowns.
Njengamanje uShalulile usashaye amagoli ayisithupha kanti usilele emuva ngayisithupha kuBradley Grobler weSuperSport United oseshaye angu-12. UShalulile uqede isizini edlule kunguye noGabadinho Mhango we-Orlando Pirates abahamba phambili ngokubhakuzisa inethi ngamagoli angu-15 ngamunye.
USha-Sha uzothemba ukuthi uzokwazi ukuqhubeka la agcine khona eshaya amagoli amabili behlula iBlack Leopards ngo 2-1 maphakathi neviki uma sebebhekene neChippa United eLucas Moripe Stadium ngeSonto ntambama.
Previous Previous post: ‘Kuyobe wayezigangela nje uScreamer uma eyalela ukuthi akudlalwe kanjani, akahlangene nokuqeqesha,’ kusho uKhoza
Next Next post: Umcabango wokudlala phambi kwezihlwele ezingu-90 000 yiwona owaletha uNurkovic kwiChiefs